Tenisy ambon'ny latabatra :: Mpilalao roa ambin’ny folo horaisin’ny “Sport-études” • AoRaha
Tenisy ambon’ny latabatra Mpilalao roa ambin’ny folo horaisin’ny “Sport-études”
Nisokatra ny taom-pianarana sady fanatanjahantena na « Sport-études ». Mpilalao tenisy ambony latabatra roa ambin’ny folo, eo anelanelan’ny 15 hatramin’ny 20 taona, no horaisin’ny io fandaharanasa io, eny Ampefiloha. Tafiditra amin’ny tetikasan’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjaha­tena miaraka amin’ny Akademia nasionalin’ny fanatanjahan­tena izao hetsika izao.
Nanomboka ny alatsinainy teo ny fianarana ary hitohy hatrany amin’ny fiafaran’ny taom-pianarana mihitsy. Mpilalao zazalahy dimy sy zazavavy fito no voafantina tamin’ny taranja tenisy ambony latabatra. “Raisin’ny fanjakana an-tanana manontolo, ankoatra ny fanazarantena, ny fianaran’izy ireo” , araka ny fanamarihan-dRakotoarisoa Tahiry, tale teknika nasionaly.
Isa-maraina izy ireo no mianatra raha toa ka ny tokalandro no hanaovany ny fanazarantena eo ambany fiahian’ny teknisianina nivoaka teny amin’ny anjerimanontolo. “Tanjonay ny famolavolana ireo tanora taninketsa ho avin’ny taranja sady fanomanana rahateo koa ny Lalaon’ny Nosy amin’ny faran’ny volana jolay”, hoy hatrany Rakotoarisoa Tahiry .
Mbola ny taranja tenisy ambony latabatra sy ny atletisma ihany aloha no hampiharana ity tetikasa ity tamin’ireo taranja maro efa nisy teny amin’ny ANS Ampefiloha tao anatin’
ny dimy taona izao.
Kitra Analamanga :: Resy fanintelony ny Elgeco Plus